Warqad furan oo ka socota VSA
Boostada soo socda ayaa markii hore lagu daabacay bogga internetka VSA Minnesota, hay'adda gobolka ee farshaxanka iyo naafada. Inkasta oo aynu ognahay in VSA ay samaysay go'aan adag, waan ku faraxsanahay inaan aragno qaar ka mid ah adeegyada ay heli doonaan shaqeynta Farshaxanka Farshaxanka, COMPAS, iyo Guddiga Farshaxanka Gobolka.
Gacaliye Taageeraha Minnesota ee VSA,
Marna ma fududa in la wadaago warka xun; Qofna ma doonayo in uu sameeyo oo cidna ma rabto in ay maqasho. Hase yeeshee, waxaa jira waqtiyo ay tahay in la sameeyo, sidaas halkan waa tagtaa.
VSA Minnesota - waa hay'ad dawladeed oo ku saabsan farshaxanka iyo itaal-darrida - waxay xiri doontaa albaabadeeda waxayna joojin doontaa hawlaheeda dhamaadka Sebtembar 2019.
Guddiga Agaasimayaasha ayaa go'aankan sameeyay bishii Oktoobar ka dib markii ay ku dhawaad hal sano oo ah baadhitaan bulsho, falanqayn lacageed, iyo baadhis urur. Waxyaabaha asaasiga ah ee keenay go'aankan waxaa ka mid ah:
Khayraad maaliyadeed oo weligeed ah si ay u taageeraan shaqadooda;
Hawlgabka dhow ee shaqaalaheeda, Craig Dunn iyo Jon Skaalen; iyo
Ka lumitaanka xuquuqda magacaaga, VSA Minnesota, laga bilaabo Jannaayo 1, 2020, sababo la xidhiidha arimaha calaamadaha leh Xarunta John F. Kennedy ee Farshaxanka.
Waxaad ogaan doontaa taas "Howlgalka ayaa la qabtay" ma aha mid ka mid ah qodobada lagu xusay liiska kor ku xusan. Ururku ma sheegi karo in aanu si buuxda u abuurnay bulsho ay dadka curyaamiinta ahi bartaan, ka qaybqaataan, iyo helitaanka farshaxanka. Waxaanu abuuray awood dheeri ah oo ku wajahan hawlahaas iyo in badan oo Minnesotans ah ay heli karaan barnaamijyada farshaxanka iyo farshaxanka farshaxanka intii aan la aasaasin kahor intii aan furnay 1986. Dhab ahaantii, ma dhicin in la sheego in dadka Minnesotansa ee naafanimada leh ay fursad weyn u leeyihiin fanka shaqsiyaadka naafada ah ee 49 gobol oo kale. Si kastaba ha ahaatee, ma dhihi karno in qof kasta oo naafanimo leh ee gobolkani uu haysto ficil buuxa oo siman oo farshaxanka ah dhammaan qaababka.
Iyadoo la tixgelinayo la'aanta farsamooyinka dhamaystiran, shaqaalahayaga iyo guddiga ayaa shaqeynaya sanadkan si aan u dhisno "guri" iyo wakiillo cusub oo ku saabsan barnaamijyadayada iyo adeegyada mudada dheer. Haddaba, Farshaxanka Farshaxanka ayaa oggolaaday in adeegyadayada loogu daro farshaxanada barnaamijka naafanimada ee barnaamijyada ay bixiyaan. Sidoo kale, COMPAS wuxuu nasiib u yeelan doonaa barnaamijka farshaxanka dugsiga ardayda naafada ah iyo baahida waxbarasho ee khaaska ah. The Guddiga Farshaxanka Gobolka, kaas oo maalgeliyey annaga Deeqaha Hagaajinta ADA sagaalkii sano ee la soo dhaafay, ayaa maamuli doona barnaamijka guriga dhexdiisa laga bilaabo bisha Oktoobar 2019. Bilaha soo socda, waxaanu u shaqeyn doonaa sidii aan u heli lahayn wakiillada ururada adeegyadayada adeega, Taariikhda Ciyaaraha ah, iyo barnaamijka kaalmada naafada ee barnaamijka naafada. Waxaan kalsooni ku qabnaa in raadinteena nala wadaagayaasha barnaamijka ay ku guuleysan doonto iyo in shaqadu bilaabatay inta lagu jiro jiritaanka ururkeenna 33-sano jirku sii socon doono.
VSA Minnesota waxay ku xirnaan doontaa nimcada, fikirka, iyo daryeelka. Shaqaalaha ayaa loo oggolaan doonaa inay si buuxda u bixiyaan, dhammaan waajibaadka barnaamijka hadda la soo saarayo, dhammaan iibiyeyaasha ayaa la siin doonaa, iyo dhammaan hantida jirka ee hay'adda ayaa loo sii deyn doonaa hay'adaha aan munaasibka ahayn ee ku haboon. Waxaan rajeyneynaa in diiwaanka ururku iyo farshaxanada taariikheed ay heli doonaan guryo aruursan.
Ka hor inta aan xirneyn dhammaadka Sebtembar, guddiga iyo shaqaaluhu waxay la macaamili doonaan bulshooyinkeena kala duwan - farshaxanka, naafada iyo waxbarashada - xafladaha guulaha iyo guulaha ururkeena. Waa rajadayada xafladahaas waxaa ka mid ah kuwa taageera iyo ka faa'iideystay shaqadayadii hore iyo sidoo kale wakiillada barnaamijyada cusub ee sii wadi doona shaqada aan bilaabanay.
Midkeenba midnaba kuma faraxsana in ururku bilaabay sida Farshaxanka Gaarka ah Minnesota oo kor ugu qaaday hay'adda hadda loo yaqaan VSA Minnesota waa inaanay noqon wax dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu ku faannaa inaanu qayb ka nahay guulihii badanaa ee sanadihii aynu soo dhaafnay annaga oo mid waliba waxaan rajeyneynaa siyaabooyin badan oo shakhsiyaadka iyo ururada cusubi ay udubdhexaadin doonaan si ay u gutaan waajibaadkooda ah inay abuuraan bulsho ay dadka curyaamiinta ahi bartaan, ka qaybqaataan, iyo helitaanka farshaxanka gobolka weyn ee Minnesota.
Haddii aad qabto wax su'aalo ama faallooyin ah oo ku saabsan geeddi-socodka xidhitaanka, fadlan u dir fariimahan info@vsamn.org. Eeg dukumeentiga SSS wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku sifeynaya xidhitaankayaga faahfaahin qoto dheer.
Anigoo ku hadlaya Guddiga Maamulayaasha VSA Minnesota iyo shaqaalaheeda, waxaan kuugu mahad celineynaa taageeradaada dadaalkayaga sanadaha badan - waxaa si weyn loo soo dhaweeyay.
Madaxweyne, Guddiga Maamulka
Jeff Prauer, Madaxweyne Ku-Xigeenka
Michele Chung, Qasnajiye
Stacy Shamblott, Xoghaye
Khayraadka Webka Janaayo 2021
Aasaasiyadu waxay soo bandhigayaan “Farshaxan xilligan xaadirka ah”